ဂိုထောင်ထဲမှ နဂါး | Curiosity Science Magazine
May 20, 2016 · by Thar Htet Aung	· in Philosophy and Formal Science.	·
“မီးမှုတ်နိုင္တဲ့ နဂါးတစ်ကောင် ငါ့ဂိုထောင္ထဲမွာ နေနတယ်”
ဒီအခ်က်ဟာ ခင္ဗ်ားကို အေတာ် စိတ္လှုပ်ရွားသြားစေမယ္ထင္တယ်။ နဂါးဆိုတဲ့အေကာင္ကို ကြားဖူးနေတာ ကြာပြီ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နေရာအသီးသီးမွာ ပုံစံမ်ိုးစုံ ဒဏ္ဍာရီမ်ိုးစုံ နဲ့ စိတ်ဝင္စားစရာကောင်းလွတယ့် နဂါးပါပဲ။ အခု အျပင္မွာ မ်က်ဝါးထင္ထင် တြေ့ခ်င္မွာပဲ။ ဒါခင္ဗ်ားအတြက်တော့ အခြင့်အေရး တစ္ခုပေါ့။
“ငါ့ကျိုပပါ။” ခင္ဗ်ားကျေပာမွာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကျန်ြတ္လောည်း ခင္ဗ်ားကို ကျန်ြတော့် ဂိုထောင္ထဲ ခေါ်သြားတယ်။ အထဲရောက်တော့ ဘီယာဘူးခြံအခ်ို့နဲ့ တစ်ျခား ပစ္စည်းအတိုအစ တြေကိုသာတြေ့ရတယ်။ နဂါးကို မေတြ့ရဘူး။
“ဘယ်မှာလဲ နဂါး” ခင်ဗျားက မေးပြီ။
“အော်… ဒီမှာ.. ဒီနေရာမှာ ရှိတယ်။” လက်ကိုယမ်းပြီး ကျွန်တော်က ညွှန်ပြတာပေါ့။ “ဆောရီး.. ဒီနဂါးက ကိုယ်ပျောက်နဂါးဆိုတာကို ပြောဖို့မေ့သွားတယ်။”
အဲ့တော့ ခင်ဗျားက ဟိုသွားဒီသွားနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခြေရာကို လိုက်ရှာတယ်။ မတွေ့ဘူး။
“နဂါးက လေပေါ်မှာ ပျံနေတာ ကွ သူငယ်ချင်းရ။”
အဲ့တော့ ခင်ဗျားက အနီအောက်ရောင်ချည်ဖမ်းစက် နဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ငွေ့ကို လိုက်ဖမ်းနေမှာပေါ့။
“ဒီအကြံကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနဂါးကိုယ်က အပူချိန်မထုတ်ဘူးကွ။”
ဒီမှာ ခင်ဗျားက ဆပရေးနဲ့ လိုက်ဖျမ်းတယ်။ နဂါးကြီး ပေါ်လာအောင်ပေါ့။
“ဆောရီး သူငယ်ချင်း.. ဒီနဂါးက သာမန် ဇီဝနဂါးမဟုတ်ဘူး။ မင်းဆပရေးတွေက သူ့ကိုယ်မှာ ကပ်မှာမဟုတ်ဘူး။” ဒီလိုပဲ ခင်ဗျားကို နဂါးကို တွေ့ရအောင် ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားကြိုးစား ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒါဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး သာမန်မဟုတ်တဲ့ ဆင်ခြေထူးတွေနဲ့ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်လုပ်နေဦးမှာပဲ။
ကဲ.. အခု စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီ ကိုယ်ငွေ့မထွက်၊ လေထဲပျံ၊ ကိုယ်ပျောက်နေတဲ့ နဂါး နဲ့ လုံးဝနဂါးမရှိတာနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ် နှစ်ခု ဘာကွာလဲ။ ကျွန်တော်က နဂါးရှိတယ်လို့ပြောထားတာကို မဟုတ်ကြောင်း ခင်ဗျားက ရေရေရာရာ သက်သေပြပြီး မချေဖျက်နိုင်ဘူး၊ စမ်းသပ်မှု တစ်ခုလုပ်မပြနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ ဒီနဂါးကြီးဟာ အဲ့မှာ တကယ်ရှိတယ်လို့ သဘောသက်ရောက်မှာလား။ သက်သေမရှိခြင်းဟာ မရှိခြင်းရဲ့သက်သေ လို့ပဲ တွေးလိုက်ရတော့မှာလား။ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို ဖြစ်စေချင်နေတာက ယုံကြည်မှု ဖြစ်လာဖို့ပဲ။ သက်သေမရှိလည်းကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ ခင်ဗျားက ဒီဂိုထောင်ထဲမှာ နဂါးရှိတယ်လို့ ယုံကြည်လိုက်ရတော့မယ့် အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။
ဒီမှာကျွန်တော့်ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေ၊ စကားတွေ၊ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေကနေတစ်ဆင့် ခင်ဗျားသိလိုက်ရတာက အဲ့ဒီ ဂိုထောက်ထဲက နဂါးဟာ ကျွန်တော့် အတွေးထဲမှာပဲ အကြောင်းမဲ့သက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ ရယ်စရာတစ်ခုဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေသူပေါ့။ တကယ်မရှိတာကို ရှိတယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်နေလို့လေ။ ခင်ဗျားက နည်းနည်းတော့ အံ့သြမိမှာပဲ။ မျက်ဝါးထင်ထင်လည်းမတွေ့ရဘူး၊ ဘာသက်သေမှလည်းမရှိဘူး၊ ဒါကို ဘာလို့ ကျွန်တော်က ယုံကြည်နေရသလဲပေါ့။ ဘာလို့ ကျွန်တော်က အပြင်းအထန် ယုံကြည်နေရတာလဲ။ သေချာတာကတော့ တကယ်လို့ ကျွန်တော်ဟာ ခင်ဗျားက နဂါးရှိတာကိုမယုံလို့ စဉ်းစားမပေးလို့ဆိုပြီးတော့ ခင်ဗျားကို ပြဿနာရှာမယ်ဆိုရင်ကတော့ ဘယ်တရားမလဲ။ ကျွန်တော်လွန်တာပေါ့။ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကို ခင်ဗျားက လိုက်မယုံကြည်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်က စိတ်မဆိုးသင့်ဘူး။
နည်းနည်းလောက် ထပ်ကွန့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ ဒီလိုယုံကြည်နေတာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားအသိတွေတော်တော်များများ အပြင် အချို့ ခင်ဗျားမသိတဲ့လူတွေကပါ သူတို့ ဂိုထောင်တွေထဲမှာ နဂါးတွေရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်နေတယ်ဆိုပါစို့။ အကုန်လုံးမှာလည်း မျက်မြင်သက်သေက ရေရေရာရာမရှိဘူး။ ကျွန်တော့်လိုပဲ ဘယ်လိုစမ်းစမ်း အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ရူးနေတယ်လို့ လာမပြောနဲ့နော်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဂိုထောင်တွေအသီးသီးမှာ နဂါးတွေ တကယ်ရှိနေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့တွေက တက်ညီလက်ညီ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ နဂါးက တစ်ချိန်လုံး ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ လေထဲမှာ ပျံနေရတာ ညောင်းလာပြီထင်ပါ့။ နဂါးခြေရာအချို့ကို တွေ့ပြီတဲ့။ ဒါပေမယ့် သံသယစိတ်နဲ့ သွားစစ်တိုင်း ဘယ်တော့မှ မတွေ့ရပြန်ဘူး။ နေပါဦး။ ဒီ သက်သေကြီးဟာ လုပ်ကြံထားတဲ့ သက်သေအတုကြီးများဖြစ်နေပြီလား။ သံသယစိတ်တော့ဝင်လာပြီ။ တစ်ခြား နဂါးယုံကြည်သူတစ်ယောက်က သူ့လက်မီးလောင်နေတဲ့ ဒဏ်ရာလေးကိုပြပြီးတော့ အဲ့ဒါဟာ နဂါးမီးမှုတ်လိုက်လို့ ရတဲ့ဒဏ်ရာပါဆိုပြီး လာပြမယ်။ ဒါပေမယ့် အခြား ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ လက်မီးလောင်တဲ့ဒဏ်ရာဟာ နဂါးမီးမှုတ်လို့ဆိုတာထက် အခြားအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိတယ်။ နဂါးယုံကြည်ထောက်ခံသူတွေက ဘယ်လိုသက်သေပဲပြပြ သူ့သက်သေဟာလည်း ရေရေရာရာမရှိဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော် စဉ်းစားမိလာတယ်။ ဒီနဂါးလိုပဲ အခြားယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း လူတွေဟာ တကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ အဟုတ်ယူဆပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ယုံကြည်နေကြတယ်ဆိုရင်ကော။ ဟာဗျာ။ ရှုတ်လာပြီ။ ကျွန်တော်ဘာတွေ လျှောက်တွေးနေမိမှန်းမသိဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိပ္ပံပညာ ကိုပဲ ပြန်အာရုံစိုက်မှ။
“တစ်စုံတစ်ခုကို အကြွင်းမဲ့မယုံကြည်ပဲ အရာအားလုံးကို သံသယစိတ်နဲ့ စူးစမ်းတတ်တာဟာလည်း သိပ္ပံပညာ ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။”
အင်းဗျ။ ဒါလဲ ဟုတ်တာပဲ။
Ref : “Dragon in My Garage” by Carl Sagan
← စကြဝဠာ၏ ကနဦးအစ
Collagen အားဆေး တကယျအာနိသငျရှိရဲ့လား? →